Anton Nossik: Fitsaharan’ny Facebook, Ny Twitter, Ary Ny Google Ao Rosia Atsy ho Atsy · Global Voices teny Malagasy
Anton Nossik: Fitsaharan'ny Facebook, Ny Twitter, Ary Ny Google Ao Rosia Atsy ho Atsy
Voadika ny 14 Oktobra 2014 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English, English
Mety hisy apokalypsa Roasiana kotrikotrehana ho an'ireo tambajotra sosialy sahala amin'ny Facebook, Twitter, ary Google. Sary natambatr'i Kevin Rothrock.
Toa azo eritreretina hihenjana ny fifandraisan'i Rosia amin'ireo goavan'ny Aterineto Amerikana. Vao maraina androany 26 Septambra, nanambara ny Sampandraharaha Federaly misahana ny Fanarahamaso ny Serasera, Teknolojian'ny Fanomezam-baovao, ary ny Mediam-bahoaka Rosiana (Roskomnadzor) fa nangataka tamin'ny fomba ofisialy ny Facebook, Twitter, ary Google izy mba hankato ny lalàna vaovao mitaky amin'ireo “mpandrindra ny fizaràna ny vaovao” mba hitahiry ao amin'ny tany Rosiana mandritra ny enim-bolana ireo angon-drakitra efa dila, manao azy ireo ho azo hidiran'ny mpitandro ny filaminana Rosiana. Ankoatr'izany, vonona ny hanolotra ny vakitenin’ny fanitsiana farany natao tamin'ny lalàna iray hafa ny Duma, izay hitaky amin'ireo vohikala sy ireo fampiasa sasantsasany mba hitahiry ireo angon-drakitr'ireo mpampiasa aterineto rehetra ao anatinà lohamilina mipetraka ao Rosia ny voalohan'ny volana Janoary 2015, fa tsy ny volana Septambra 2016, araka ny vinavina napetrak'ilay lalàna tany am-boalohany.
Efa volana maromaro sahady izay, lasa resaka tsy tapaka amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Runet ilay siosio milaza fa hotapahan'ny Kremlin ny fidirana amin'ny media sosialy amin'ny aterineto Amerikana. Ankehitriny, milaza ilay anisan'ny feo henoina indrindra ao amin'ny Aterineto Rosiana fa mino izy fa ho anisan'ny tantara fahiny teo anivon'ny sehatry ny Aterineto Rosiana ireo vohikala sahala amin'ny Facebook, Twitter, ary Google. Manoratra ao amin'ny LiveJournal androany, nazavain'ilay manampahaizana momba ny media sady mpikambana mpamorona ny sehatry ny bilaogy Rosiana, Anton Nossik, ny antony ieritreretany fa efa antomotra ny farany ho an'ireo vohikala nampiasain'ny olona an-davitrisany manerana ny tany.
Miaraka amin'ny fanomezan-dàlan'ny mpanoratra, ataon'ny RuNet Echo afaka hojeren'ireo miteny Anglisy ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogin’i Nossik.
“Facebook, Twitter, ary Google: ireo Fandehan'ny Fanapahana,”
nosoratan'i Anton Nossik
Nanomboka nanomana ny fibahanana ireo lohamilin'ny Facebook, Twitter ary Google ny Roskomnadzor.
Ny hisakana ireo tolotra ireo aorian'ny tapaky ny taona 2016 no lamina tany am-piandohana, fa niova hevitra tampoka ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny Duma tamin'ity herinandro ity, nanaiky ny fanovàna natao tamin'ny lalàna vaovao izay manova ny datin'ilay fanapahana ho amin'ny 1 Janoary 2015. Fa nihazakazahan'ny Roskomnadzor milaoha ny namorona fepetra ho amin'io fanapahana io.
Mandeha ambaratonga roa ny teknolojian'ilay fanapahana. Voalohany, hatolotry ny governemanta amin'ireo orinasa Aterineto avy any ivelany ireo fangatahana tena tsy afaka ampiharina, mba hametraka ny angon-drakitr'ireo mpampiasa rehetra ho amin'ny toerana ambany fanaraha-mason'ny FSB Rosiana [Sampandraharaha Fiarovana Federaly]. Avy eo, tapahan'ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny firenena izy ireny noho ny tsy nahavitàny nanantontosa ireo fangatahana ireo. Ny marimarina kokoa, hotapahan'izy ireo tsy hifandray amin'izy ireny isika.
Aorian'ny firaketan'ny Roskomnadzor azy toy ho mpandrindra ny fizaràna ny vaovao, ny vohikala iray dia mila mitazona “ao amin'ny fari-piadidian'ny Federasiôna Rosiana ny momba ny fandraisana, fampitàna, fanaterana, sy (na) ny fikarakarana ny serasera am-bava, soratra, sary, feo, na ireo fomba elektronika hafa hampiasain'ireo mpampiasa ny Aterineto [tao anatin'ny enim-bolana farany].” Manazava ny Roskomnadzor fa mety handoavana lamandy mihoatra ny 500.000 rubles ny tsy fankatoavana ireo fangatahana ireo.
Mety mieritreritra ianareo hoe nanadino fiavahana iray lehibe ireo mpilaza vaovao ao amin'ny Izvestia: ny angon-drakitra inona marina moa no tena tokony hotahirizina ao amin'ny tany Rosiana. Mikasika ireo olom-pirenena Rosiana ihany ve izany, ireo mpampiasa Aterineto amin'ny fiteny Rosiana rehetra manerana ny tany, sa ireo olom-pirenena avy amin'ny firenena rehetra, izay hita ao amin'ny tany Rosiana, rehefa mampiasa ny Vohikala?
Ny tena marina, tsy tompon'andraikitra na amin'ny inona na inona ireo mpanao gazety ao amin'ny Izvestia eto. Marina tokoa fa tokony afaka nanontany ny mpiasam-panjakana ao amin'ny Roskomnadzor izy ireo amin'izany fanontaniana mahaliana izany, ary mety efa nanontany mihitsy aza izy ireo, fa tsy nomena alàlana hamoaka an-tsoratra ny valiny. Ny tena marina amin'io dia tsy tena voasoratra ao anatin'ny lalàna federaly nolanian'ny governemanta ilay valiny. Tsy nisy ezaka natao mihitsy mba hamerana ny fetran'ny fahefan'ireo lalàna avy amin'ny Duma ary ny fetran'ny faribolan'ny tombontsoan'ny FSB Rosiana — tsy avy amin'ny zom-pirenena, tsy amin'ny fiteny, tsy amin'ny toerana ara-jeografika. Raha mamaky ny Lalàna Federaly andininy faha 97 ianao araka ny nanoratana sy ny nandaniana azy marina, ho hitanao fa mikasika ny fandraisana sy ny famindràna angon-drakitry ny rehetra io — Amerikana sy Eorôpeana, Japoney sy Kanadiana, Israeliana sy Neo Zelandais, ary tsy misy fanavahana mihitsy. Ary midadasika be ihany koa ny famaritan'ny lalàna ny atao hoe bilaogy. Mamelà ahy ianareo mba hitanisa ilay lalàna, satria mety tsy hino ahy mihitsy ianareo:
Ny tomponà vohikala sy (na) pejy manokana ao aminà vohikala ao amin'ny Aterineto, izay ahitàna loharanom-baovao afaka jeren'ny sarambabem-bahoaka ary mahazo mpitsidika mihoatra ny 3.000 ao anatin'ny iray andro avy amin'ireo mpampiasa ny Aterineto, (antsoina amin'ny anarana hoe “mpitoraka bilaogy/bilaogera”) dia tsy maintsy manaraka ny lalànan'ny Federasiôna Rosiana, rehefa mizara sy mampiasa io vaovao io, tafiditra ao anatin'izany ny fizaràna ilay vaovao voalaza tao aminà vohikala na ny pejin'ny vohikala-nà mpampiasa Aterineto hafa.
Mazava tsara eto fa tsy misy mihitsy famerana amin'ny lafiny rehetra. Na amin'ny zom-pirenena, na amin'ny fiteny, ary na amin'ny ara-jeôgrafia. Raha mahazo mpitsidika manokana miisa 3.000 ianao ao anatin'ny andro iray , tafiditra ao anatin'ny lisitra ianao, noho izany maneke azafady. Na dia fiteny Indoneziana aza ny anao ary avy any amin'ny nosin'i Java daholo ireo mpamaky anao. Na ianao manaiky ny lalànan'ny andianà ondry [dikany eto hoe : Rosia], na bahananay tsotra izao. Izany no ambaran'ilay lalàna.
Mazava ho azy, tsy misy mieritreritra ny hanaraka io lalàna io araka ny nandaniana azy. Efa zavatra hafa no natao hatrany am-boalohany. Folo andro talohan'ny nampiharana ilay lalàna, nanazava tamin'ny olona rehetra i Maxim Ksenzov avy ao amin'ny Roskomnadzor fa tsy hampihàtra ireo zavatra napetrak'ilay lalàna ny masoivohony afa-tsy ny pôlitikan'ny fanivànana voasafidy.
Tsy mikendry ary tsy nieritreritra ny hikendry ny hanao fanisàna ireo mpampiasa Aterineto Rosiana fanta-bahoaka rehetra izahay. Ho asa tsy ilaina akory izany, ary tsy ho amin'izany koa ny anton'ilay lalàna. […] Tsy noforonina ho afaka hanome antontan'isa ilay firaiketana ireo mpitoraka bilaogy noforonin'ilay lalàna, izay nalefan'ny Roskomnadzor ny 01 Aogositra […]. Tsy hitanay akory izay ilàna manokana ny hanaovana ny fanisàna ireo mpampiasa Aterineto izay mety ho tafalatsaka ao anatin'ny sokajin'ny “mpitoraka bilaogy” araka ilay lalàna. Ho angonina ireo antontan'isa hampiharana ilay lalàna ary ho malefaka izy io.
Ny fahalefahany manaraka ny zava-miseho angamba no famaritana ny fomba fampiharana ny lalàna Rosiana amin'ity fotoana ity. Izay hotondroin'ny tànany rahampitso no ho ilay manaraka hiharan'io “fahalefahana manaraka ny zava-miseho” io. Fa ny hanapaka ny tolotry ny Facebook, Twitter, ary Google ao Rosia aloha izao no tena mitàna ny laharam-pahamehana voalohany. Nametraky ny Duma ny fe-potoana ho ny 01 Janoary 2015 , saingy ny Roskomnadzor kosa maika ny hampiharana io mialoha an'izany.
Tsy fantatro mihitsy hoe inona no nahatonga io hazakazaka io. Amin'ny zavatra rehetra aloha, miresaka momba ny karazana teknolojian'ny fanapahana fotsiny aloha isika amin'izao, izay mbola afaka hihharana mora miaraka amin'ny fanampian'ny “proxies” sy ny VPN.
Dika manontolo ny lahatsoratr‘i Anton Nossik ity lahatsoratra ity, izay niseho tamin'ny fiteny Rosiana tao amin'ny bilaogy LiveJournal an'i Nossik, ny 26 Septambra 2014.